नामक चासो के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki ब्याज दर
1 नामित ब्याज दर के हो?
1.1 उदाहरण: सामान्य नाममात्र ब्याज गणना
2 नामक र प्रभावकारी ब्याज दरहरू बीचको अंतर
2.1 उदाहरण: प्रशोधन फीड विचार गर्नुहोस्
3 नामांकन र वास्तविक ब्याज दर बीचको अंतर
3.1 उदाहरण: वास्तविक ब्याज दरको द्रुत अनुमान
4 स्थिर र लचीला ब्याज दर
नामित ब्याज दर के हो?
der ब्याज दर एक प्रकारको मुद्रा रुचि हो। यो प्रकारको रूची सहमतिको ब्याज दर हो, जुन ऋणको लागी हो वा तपाईले वित्तीय लगानीको लागि प्राप्त गर्नुभएको छ। यसमा कुनै पनि अतिरिक्त लागतहरू जस्तै परामर्श शुल्क छैन। एक वर्षको अवधि सामान्यतया ब्याज दरको लागि प्रयोग गरिन्छ। संक्षिप्त "पा" "प्रति वर्ष" को लागि खडा हुन्छ र लैटिनबाट "प्रति वर्ष" प्राप्त गर्दछ।
उदाहरण: सामान्य नाममात्र ब्याज गणना
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक क्रेडिट संस्था ले 10.000 यूरो को एक 4% को ब्याज दर मा उधारो लिन्छ। त्यसैले, तपाईले 400 यूरो प्रति वर्ष ब्याज तिर्न पर्छ। यस रकमले तपाईंको अतिरिक्त उठ्न सक्ने कुनैपनि अतिरिक्त खरिदहरू समावेश गर्दैन।
नामक र प्रभावकारी ब्याज दरहरू बीचको अंतर
नामक ब्याज दर प्रभावी ब्याज दर देखि भिन्न हुन सक्छ। ब्याज दर, जुन नामक ब्याज दर र अन्य भागहरु संग बनाइन्छ, प्रभावी ब्याज दर को रूप मा नामित गरिन्छ।
ब्याज दरमा सहमति भएको सन्दर्भमा निर्भर गर्दछ, प्रभावकारी ब्याज दरमा फरक अतिरिक्त लागतहरू समावेश हुन सक्छ। स्वीकृत भुक्तानी र ब्याज भुक्तानीहरूको स्वभाव पनि भूमिका निभाउँछ।
क्रेडिट संस्थाहरूले उनीहरूको प्रसोधन लागत चार्ज गर्न सक्छन्। यी प्रसोधन लागतहरू प्रभावी ब्याज दरमा पनि समावेश छन्। यस अवस्थामा, प्रभावकारी ब्याज दर नामांकित ब्याज दर माथि बढ्छ।
जब पैसा उधार्दा, तपाईंले न केवल नामासिक ब्याज दरमा ध्यान दिनु पर्छ। कृपया यसको सट्टा प्रभावकारी ब्याज दरलाई पनि विचार गर्नुहोस्। यो पनि निर्दिष्ट हुनुपर्छ।
उदाहरण: प्रशोधन फीड विचार गर्नुहोस्
सुरुदेखि उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईंले 10.000 यूरो लिनुहुन्छ र 4% को नामांकित ब्याज दरमा सहमत हुनुभयो। यो सरल गणनाको अनुसार, तपाईं वार्षिक रूपमा 400 यूरो भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ - तर नाममात्र ब्याज दर घटाइएको छ। अक्सर थप लागत थपिएको छ।
तपाईंको बैंक पनि एक सपाट दर € 100 प्रक्रिया शुल्क एक वर्ष चार्ज मानौं। यो गणना उदाहरण मा, तपाईं अब 400 यूरो प्रति वर्ष प्रभावकारी 500 यूरो तिर्न, तर। यूरो को 500 10.000 यूरो 5% छन्। यदि कुनै अन्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लागत थपिएका छन्, त्यसैले हुनत ब्याज दर 5% मा रहन्छ, 4% को एक वैशाख तिर्ने।
नामांकन र वास्तविक ब्याज दर बीचको अंतर
वास्तविक रूचि पनि नामांकन ब्याज दरमा निर्भर गर्दछ। चासो वास्तविक दर निर्धारण गर्न, तपाईं गणना मा मुद्रास्फीति दर समावेश गर्नुपर्छ। वास्तविक ब्याज दर पछिल्लो (पूर्व पोस्ट) मा एक पहिले नै लिइएको स्थान मुद्रास्फीति वा अपेक्षित भविष्य वास्तविक ब्याज दर (पूर्व Ante) मा उल्लेख गर्न सक्छन्।
यदि मुद्रास्फीति दर नाममात्र ब्याज दर भन्दा माथि हो भने वास्तविक ब्याज दर नकारात्मक हुन सक्छ।
उदाहरण: वास्तविक ब्याज दरको द्रुत अनुमान
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले बैंकको साथ आफ्नो पैसा निवेश गर्नुभएको छ र 5% को नामांकित ब्याज दरमा सहमत हुनुभयो। यदि मुद्रास्फीति दर 2% हो भने, निम्न अधिशेष गणना परिणामहरू:
5 -2= 3।
वास्तविक ब्याज दर मा लगभग 3% यो उदाहरण छ। कति उच्च वा वास्तविक ब्याज दर मा, तर धेरै अवस्थामा यो कुनै न कुनै गणना कुनै न कुनै विचार गर्न अनुमति दिन्छ - वास्तविक ब्याज दर को वास्तविक गणना धेरै जटिल छ।
स्थिर र लचीला ब्याज दर
नामक ब्याज दर या तो एक निश्चित संख्या या लचीला चर हो सकते हो। लचिलो ब्याज दर फरक ब्याज दरसँग सम्बन्धित छ, उदाहरणको लागि, पूंजी बजार दरमा। यसको विपरीत, निश्चित (निश्चित) ब्याज दर निर्दिष्ट नम्बरको साथ निर्दिष्ट गरिएको छ।
यद्यपि, एक निश्चित ब्याज दर पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। यद्यपि, यस परिवर्तनमा सहमत भएको छ। उदाहरणका लागि, यो सम्भव छ कि पहिलो वर्षमा ब्याज दर 4% हो, दोस्रो वर्ष 4,5% र तेस्रो वर्षमा 5%। यस्तो सम्झौता लिखित अनुबंधमा पनि राखिएको छ।
अघिल्लो लेखअनुस्मारक क्रेडिट
अर्को लेखकोर कोष